★မြန်မာ့အလင်း★: မွတ်ဆလင်များသည် ငါတို့မြန်မာများ၏ တပည့်များသာဖြစ်၏
မွတ်ဆလင်များသည် ငါတို့မြန်မာများ၏ တပည့်များသာဖြစ်၏
ကျုပ်တွေခေါင်းအေးအေးထားပြီး စဉ်းစားဖို့ အချိန်ရောက်ပါပြီ။ မြန်မာတွေဟာ (ကရင်၊ ကချင်၊ ရခိုင်၊ ဗမာ၊ ၇ှမ်း အားလုံးကို ရည်ညွှန်းပါသည်) လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်တွေ၊ နိုင်ငံရေးအစွန်းရောက်တွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ ငါက ဒီမိုကရေစီသမားကွ… မတူညီတဲ့အမြင်ကိုလက်ခံလို့ ဒီမိုကရေစီတောင်းနေတာဆိုပြီး ဆင်ခြေပေးကြပါလိမ့်မယ်။ တကယ်လက်တွေ့မှာတော့ မိမိနဲ့အမြင်မတူရင် ဒီမိုဘလော့တွေမှာ လုံးဝ ထုတ်ဖေါ်ခွင့်မပေးဘူးမဟုတ်ပါလား? ထို့အတူပဲ စစ်တပ်ဘာပဲလုပ်လုပ် အကောင်းမြင်နေတဲ့ နအဖလူတစ်ချို့ဟာလည်း အစွန်းရောက်နေတယ်လို့ပြောရင် လက်မခံကြပါဘူး။ သူတို့ဟာ နအဖမီဒီယာတွေမှာ ရေးထားထားတဲ့ ဒီမိုသမားတွေရဲ့ အပုတ်ချသတင်းဆောင်းပါးတွေကို သာမန်လို့ပဲ မြင်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အခြားတဖက်ရဲ့ အာနည်းချက်တွေကို ထပ်ခါထပ်ခါပြောတာတွေနဲ့ ပုံကြီးချဲ့ အပြစ်တင်တာတွေဟာ ၀ါဒမှိုင်းတိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာ သူတို့မသိကျပါဘူး။ အခုဆိုရင် မြန်မာတွေဟာ ဒီမိုသမားနဲ့ နအဖလူဆိုပြီးခွဲထားပြီး တဖက်နဲ့ တဖက် အမုံန်းကြီးမုံန်းနေကြပါတယ်။ တိုင်းပြည် စည်းလုံးမှုပြိုကွဲနေတဲ့ လက္ခဏာပဲ။ မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ဆုံးမချက်နဲ့အညီ တစ်ယောက်အမှားတစ်ယောက် နားလည်တာတွေ သည်းခံတာတွေလုပ်မှသာ တိုင်းပြည်ဟာ နလန်ထူလာမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျုပ်တို့တွေ အချင်းချင်း မကြီးမငယ်နဲ့ရန်ဖြစ်နေလို့ မိမိလူမျိုးကို ပြန်ပြီး အထင်သေးကြမှာပါ။ တကယ်တော့ လူမျိုးဗီဇနဲ့မသက်ဆိုင်ပဲ ကျနော်တို့ မျိုးဆက်ရဲ့ အားနည်းချက်သာဖြစ်ပါတယ်။ ကျုပ်တို့ရဲ့ ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေဟာ ညံ့တဲ့သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာ့သိုင်းကို မွတ်ဆလင်တွေ ကတောင် တလေးတစားနဲ့ သင်ယူနေပါပြီ။ အခုဗီဒီယုလေးတွေကြည့်ပြီး မျိုးချစ်စိတ်တွေပြန်လည်နိုးထလာပါစေ. . . ၀ါဒမတူတဲ့သူတွေအချင်းချင်းလဲ သဘောထားကြီးလာကြပါစေ
အာဖရိကတိုက်က Morocco နိုင်ငံမှာ အများစုက မွတ်ဆလင်များသာဖြစ်ပါတယ်။ လူကြီးလူငယ်မရွေး မြန်မာ့ ဘိုးဘေးဘီဘင်တို့ရဲ့သိုင်းကို လေ့လာနေပါတယ်။
ဒါလဲ အာဖရိကတိုက်က Algeria နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုမှာမြင်ရသလိုပဲ အင်တိုက်အားတိုက် မြန်မာ့တပည့်များဖြစ်နေပါတယ်။
ကျနော်တို့ ကလေးငယ်လေးတွေ ကရာတေးလေ့လာနေချိန်မှာတော့ Dubai က မွတ်ဆလင် ကလေးတွေက ဘန်တိုကိုလေ့လာနေပါပြီ